Roll Machine တွင် Coreless နှင့် Core Bag ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး Roll Machine တွင် Coreless နှင့် Core Bag မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
ပုံစံ - SCR Series
Core နှင့် Coreless S-Roll Making Machine တွင် Die Cut Bottom Sealing သို့မဟုတ် Star Sealing Bag
Servo မှ လွင့်ထွက်သွားသည်။-အစာကျွေးခြင်းစနစ်,tensionless sealing ဖြင့် ရုပ်ရှင်.
ရပ်တန့်ရန် ဖလင် သို့မဟုတ် အိတ်ကွဲကို အလိုအလျောက်စစ်ဆေးပါ။.
Rewind device ကို အမြန်နှုန်းစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။,ပြန်ရစ်နှုန်းက အလိုအလျောက် လိုက်လာပါလိမ့်မယ်။.
P.ဌ.ဂ.ဖြတ်တောက်ခြင်း အစီအစဉ်ကို အွန်လိုင်းမှ ထိန်းချုပ်ထားသည်။;ဇ.အမ်.ငါ.တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း။.
core နှင့် coreless rewind device ကို တစ်ပြိုင်နက် ရွေးချယ်နိုင်သည်။.
S ကို တပြိုင်နက် ရွေးချယ်နိုင်သည်-အသေဖြတ်ခြင်းနှင့် အောက်ခြေတံဆိပ်ဖောက် ကိရိယာ.
မော်ဒယ် အိတ်ပြုလုပ်ခြင်း။(မီလီမီတာ) အိတ်ကို အရှိန်မြှင့်သည်။
လိုင်းအမြန်နှုန်း လေပေးဝေမှု လိုအပ်သည်။ အပူပေးအဖုံး.
တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။&ဖြတ်တောက်ခြင်း။ Coreless Rewind Core Rewind Core အရွယ်အစား Dia.*ဌ ဌ. ဒဗလျူ. ဇ.
အကျယ် အရှည် အထူ အကျယ် Dia. အကျယ် Dia.
SCR-500VWS 50~350 100~1900 0.08~0.15 75~400 မက်တယ်။.130 220~475 မက်တယ်။.200 D35-D55*L220-475 (20-120/မင်း)
300L/မိ စုစုပေါင်း:1.4KW ဆာဗိုမော်တာ:2.9KW
AC မော်တာ:4HP+ဂီယာဘောက် 7.5KW 5.5M 2.0M 2.2M
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/coreless-and-core-bag-on-roll-machine.html
ကျနော်တို့အနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ကြောင်း Taiwan ထုတ်လုပ်တာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးသောထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်စက်ရုံ, Roll Machine တွင် Coreless နှင့် Core Bag ထုတ်ကုန်စတာတွေကျွန်တော်တို့ဟာအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိတဲ့ထုတ်ကုန်များ, prompt ကိုပေးအပ်ခြင်းနှင့်အတူစျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝတ်ပြုခြင်းမှာရည်ရွယ်ပါသည်။ customer ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းသည်နှင့်ကျွန်တော်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုဖန်တီးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားထုတ်ကုန်သေချာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်သမားများလွှဲအရွယ်လိုက်တတ်ဖို့စောင့်ရှောက်လော့။ အခမဲ့ဖြစ် ကျေးဇူးပြု. ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူအဆက်အသွယ် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်။
ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအကောင်းဆုံး Roll Machine တွင် Coreless နှင့် Core Bag ကိုထောက်ပံ့ပေးရန်အလေးအနက်အလုပ်လုပ်သောသဘောထားရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးနည်းပညာသည်ကမ္ဘာကို ဦး ဆောင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှ ၀ ယ်သူများ၏တန်ဖိုးထားမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးအမှာစာအမြောက်အများကို ၀ ယ်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ၀ ယ်သူများနှင့်ပူးပေါင်းရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
အကောင်းဆုံး Roll Machine တွင် Coreless နှင့် Core Bag ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Roll Machine တွင် Coreless နှင့် Core Bag မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ